April 2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
30/04/2020 by AHRN IT Posted in Activities
Myanmar New Year Amnesty of inmates in Myitkyina,athrough-care key part of this happy event
28/04/2020 by AHRN IT Posted in Activities
မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ၊၁၇ ရက် ဧပြီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှ နိုင်ငံတော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ခဲ့ရာတွင် NAP- Kachin (ပြည်နယ်အမျိုးသားခုခံကျရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ မြစ်ကြီးနား) ၏ ဉီးဆောင်မှုဖြင့် လွတ်မြောက် အကျဉ်းသားများ ART ဆေးဆက်လက် ရရှိနိုင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင် ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများကို AHRN ဝန်ထမ်းများဖြစ်သော Dr. မြတ်ကေခိုင် နှင့် Dr. စုစုအောင်တို့က အားဖြည့်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။
On Myanmar New Year, 17th April 2020, prisoners were released from Myitkyina Prison as part of the Government Amnesty. Under the leadership of the Kachin National AIDS Program, inmates received ART referral to continue their antiretroviral therapy, health education and information leaflets were provided to the released inmates. AHRN staff, Dr. Myat Kay Khine and Dr. Su Su Aung, contributed to the important through-care activities.
AHRN Shwegu Project site and Covid-19 Donation
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ AHRN စီမံကိန်းဌာနဖြစ်သည့် ရွှေကူသည် Covid-19 (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် ရွှေကူတွင်ရှိသော မြို့နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးအား လှူဒါန်းခဲ့သည်ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။ Sharing is Caring!!
AHRN-Shwe Ku ကို Access to Health Fund မှ ရံပုံငွေပံ့ပိုးကူညီပါသည်
AHRN Shwegu project in Kachin State supported withagenerous donation the Township Medical Officer in Shwegu area in their fight against Covid-19.
AHRN-Shwe Ku is funded by Access to Health Fund.